Etu ị ga-esi wuo ahia gị | Martech Zone
Anyị na-abanyekarị na ahịhịa mgbe ụfọdụ ka anyị na-ede blọgụ gbasara teknụzụ azụmaahịa akọwapụtara. A ka nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ dị n'ebe ahụ na-ewuliteghị ọnụnọ weebụ zuru oke iji malite ịmalite ndu ma ọ bụ ntụgharị na ntanetị. Nke a bụ ezigbo ihe omuma banyere otu esi ewu akara gị na ntanetị.
Taa, azụmaahịa ga-eguzobe ọnụnọ dị ike n'ịntanetị iji dọta ndị ahịa nso na ndị dị anya. Mkpokọta wepụtara njikọ nke onwe gị na ndị ahịa site na iguzosi ike n'ihe site na ịmara mmata. Ebe nrụọrụ weebụ na-enye ndị ahịa ohere itinye ozi ha niile n'otu ebe, na-eme ka ọ dịrị ndị ahịa mfe ịnwe ngwaahịa na ọrụ gị. Site na ebe nrụọrụ weebụ Freewebsite.com Etu esi ewu ulo ahia gi
Igodo nke infographic bụ mkparịta ụka nke okwu ahụ brand. Okwu ahụ sitere na ndị na-azụ anụ na-ere ehi ha, mana ọ gbanwere nke ọma karịa aha, akara ma ọ bụ okwu mkparịta ụka ka anyị na-elele ụdị ntanetị. Ugbu a akara na-egosi mmadụ ịntanetị nke ụlọ ọrụ mepụtara, gụnyere ikike ya, ntụkwasị obi ya, na ụdị ya. Ihe ọ bụla ụlọ ọrụ na-eme na ntanetị na-agbakwunye onye ahụ, a ga-echekwa ma jikwaa ya.
Tags: brandatụmatụ atụmatụotúesi ewu akara giotu esi ewu akara gi na ntanetịonline ahịaNzukọ Ahịa n'Onlinentanet
Mmekọahụ CRM mmekọrịta na uto
Nov 30, 2012 na 1:41 AM
Nkọwapụta ọnlaịnụ bụ mmetụta dị ukwuu maka azụmaahịa ọnlaịnụ ka ndị ahịa wee kwado ya. Ọ bụ ya mere atụmatụ ịzụ ahịa dị mma ji dị oke mkpa.